Sawirro:-Machadka Tababarka Xujeyda Ee SAFA Oo Bilaabay Duruus Ay Siinayaan Xujeyda Soomaalyeed – Radio Muqdisho
Sawirro:-Machadka Tababarka Xujeyda Ee SAFA Oo Bilaabay Duruus Ay Siinayaan Xujeyda Soomaalyeed
Munaasabdan lagu daah-furayay tababar ku saabsan sida xujeyda Soomaaliyeed ee sanadkaan gudanaya Muusimka Xajka loo bari lahaa Gudashada Waajimaadka iyo Acmaasha Xajka, oo uu soo qabanqaabiyay Machadka tababarka Xujeyda ee SAFA, ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Tababarka oo socondoono muddo labo todobaad ayaa Xujeyda lagu bari doonaa Shuruudaha iyo waddooyinka u sahlaya gudashada Waajibaadka Xajka ee looga baahanyahay Xaajiga, iyadoo munaasibaddana ay ka qeybgaleen Culimaa’udiin iyo qaar kamid ah Xujeyda Sanadkaan Gudaneysa Waajibaadka Xajka.
RW Rooble oo guddiga doorashada FIET ka saaray laba xubnood, digniina soo saaray
Sh Cabdulxayir Aadan, oo kamid ah Culimada ka hadashay Munaasibadda ayaa ku boorriyay Xujeyda in ay bartaan Arkaanta Xajka.
” Xujeyda wax la barayo waa Acmaasha ugu waa wayn ee laga rabo Xaajiga, marka waxa la barayo waa tusaale “Mithaal”, waana fursad qaali ah marka dadka xujeyda ah ama sii xajiyna waa inaa ay xoogga saaran barashada Shuruudaha xajka” ayuu Yiri Sh Cabdulxayir.
Sh Shariir Cabdulraxmaan culusoow, oo ayaa mahadceliyay Culimada ka shaqeysan fursadda wanaagsan ee la siiyay Xujeyda Soomaaliyeed, wuxuuna Xusay in culimada Waqti badan ay soo baranayeen Waajibaadka Xajka, balse hadda maanta Xujeyda ay heleen muddo gaaban oo si ficil ah Culimadu ugu barayaan Waajibaadka Xajka.
“Culmada marka ay soo barayeen Cilmigaan mudo dheer, marka culamada soo qaban qabanqaabisay dowradan wax ay doonaya waa in ay muddo gaaban si camali ah ay ku baraan Xujeyda, waana fursad lagu barayo wixii arkaam ah ee looga baahanyahay Xaajiga, marka waa in aad xoogga saartaan” Ayuu yiri Sh Culusoow.
Guddoomiyha Machadka Tababarka xujeyda ee SAFA, Sh Maxamuud Sh Ibraahiim Suuley, ayaa Xujeyd Soomaaliyeed kula dardaarmay in ay xoogga saaran barashada diinta islaamka, isla markaana u duceeyay dadka uu alle u fududeeyay in sanadkaan ay soo gutaan Waajibaadka Xajka.
“dadka sanadka aadaya xajka waxaan leenahay Alle ha idinka Aqbalo Xajka aad soo gudaneysaan hana idiin fudeeyo, kuwa niyaddooda ay ku jirto in Xajiyaana alle ha u aqbalo, dar daaranka waxaan adkaynayaa wax walbo waxay u baahan yahiin barasho, sidaas ayaa nagu kaliftay in aan xujeyda ka caawino tuusaalooyinka u sahlayo in ay si sax ah u gutaan Acmaasha Xajka, si ay uga fogaadaan wax kasta oo qalad u keeni kara gudasha waajibaadka Xakja” ayuu yiri Sh Suuleey.
Macadka Tabarka Xujeyda Ee SAFA, ayaa Sanadkii labaad si lacag la’aan wax loogu barayaa Xujeyda Soomaaliyeed ee dooneysa in ay gutaan Waajibaadka Xajka, iyadoo duruusta lagu bixinayana ay ka faa’ideysanayaa boqolaal Xujey ah oo ka kala yimid magaalada Muqdisho iyo goballada dalka Soomaaliya.
Sawir Qaade: Farxaan Suleyman Daahir.
Gudoomiye Guudlaawe oo sheegay in amniga Jowhar la adkeeyay, madaama lagu qaban doono shirka maamul u sameynta Hiiraan iyo Sh/Dhexe.
Ururka Iskaashiga Islaamka oo soo dhaweeyay Jadwalka Doorashada Soomaaliya